Ngwa igwe - Guangzhou Baiyi Intelligent Equipment Co., Ltd.
Product aha: ọkọlọtọ feeder
Njirimara: fechaa imewe, adaba na Mbupu, elu na ọdabara ike, mfe na-arụ ọrụ, na-eri irè. Ezu maka akwụkwọ, akara, igbe akwụkwọ, plastic plastic etc. wdg nwere ike itinye ya na TIJ na ngwa nbipute, CIJ ngwa nbipute wdg, ma ọ bụ usoro ntinye aha, ngwa nbipute laser, nke na-ahụta ụdị mbipụta ederede, onyonyo wdg.
Enwere ike ịhazi ya, ozi ndị ọzọ, biko pịa ebe a.
Product aha: oche-top feeder
Nlereanya: BY-TF01-400 / BY-TF04-300 / BY-TF02-400
Njirimara: deft imewe 、 adaba na Mbupu, elu na ọdabara ike, mfe na-arụ ọrụ, na-eri irè. Ezu maka akwụkwọ, akara, igbe akwụkwọ, akpa plastik nkịtị wdg ọ nwere ike itinye ya na TIJ na ngwa nbipute, CIJ ngwa nbipute wdg, ma ọ bụ usoro ntinye aha, ngwa nbipute laser, nke na-ahụta ụdị mbipụta ederede, onyonyo wdg.
Enwere ike ịhazi ya, ozi ndị ọzọ, biko pịa ebe a
Aha aha: Standard TTO feeder
Nlereanya ： BY-TF01-TTO
Njirimara ： Standard TTO feeder ike TTO thermal ebi akwụkwọ technology & ọgụgụ isi nri technology, ghọtara akpaaka-nri & kwes-ebi akwụkwọ n'ụzọ zuru okè. Ndị ọrụ nwere ike ịme akwụkwọ na akpa plastik (gụnyere akpa rọba, akara, igbe ndị etinyere wdg) iji bipụta ụbọchị, ihe odide, onyonyo dị mfe, ọkachasị maka koodu mgbanwe, koodu QR na ọtụtụ usoro mbipụta ọdịnaya dị ukwuu. Artistic na ezi ； ọtụtụ-eji nkwakọ, obibi, nkà mmụta ọgwụ, chemical, nri wdg gbara akwụkwọ.
Product aha: New TTO feeder (A / B)
Nlereanya: BY-Model: BY-TF01 / 02-TTO-A / BY-TF01 / 02-TTO-B
Njirimara: mmepe ya dabere na feeder Standard TTO na nkenke TTO na-eri nri nke ọma na ọgwụ anụmanụ, pesticide, mkpụrụ na ụlọ ọrụ ọgwụ ndị China ọdịnala na ụdị nzaghachi ndị ọrụ. Ọ nwere ike ọma ju ultra-mkpa, àjà ihe ọ -ụ -ụ-nro, static ọkụ eletrik na un-nkịtị imewe akpa, multi-oyi akwa M ụdị akpa, mkpọchi uwe mmechi n'akpa uwe na mfe-emeghe akpa wdg ọhụrụ akpa nri & thermal ebi akwụkwọ chọrọ. Ọsọ, nkwụsi ike na ịrụ ọrụ yana ịrụzi ọrụ rutegogo na-enweghị atụ, kachasị dozie mbipụta mmadụ na ngwugwu nri esi.
Aha aha: Nkenye TTO feeder
Nlereanya ： BY-SF01-TTO
Njirimara ： ọ bụ anyị kasị nkenke TTO feeder, adopts nkịtị esemokwu usoro, uwe nke kasị nke plastic akpa, na-eri-irè. Ọ adopts otu moto ugboro akakabarede na ọsọ. Enweghị PLC ma ọ bụ HMI, dị mfe na-arụ ọrụ, ọkụ na ibu.
Product aha: Standard nwere ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu / High-ọsọ nwere ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu
Nlereanya: BY-TF01 / 02-400
Njirimara: e mepụtara ya maka mbipụta nkịtị (gụnyere akwụkwọ obibi TIJ, HD DOD, CIJ printer, labeling etc.). ọ nwere nnukwu ihe achọrọ na teknụzụ, ike zuru ezu, ngwa ngwa. Ọ na-anabata echiche ọgụgụ isi, ụdịdị, nke mepụtara nke ọma. Suit maka iche iche nke akwụkwọ, labeelu, kaadị, mbukota igbe, karịsịa maka ngwaahịa na static ọkụ eletrik, onwe akara, multi-oyi akwa plastic igbe wdg pụrụ iche mbukota akpa nzuzo, obibi & tracing. Enwere ụfọdụ nhọrọ nhọrọ maka nhọrọ dịka nchọpụta abụọ, dozie onwe ya, ịjụ akpaaka wdg.
Product aha: multi-ọwa nwere ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu / Standard nwere ọgụgụ isi nri & labeling usoro
Nlereanya: BY-MTF02-650 / BY-SF01-TTO
Njirimara: ọ bụ maka mbipụta nkịtị (gụnyere TIJ Printer, CIJ Printer, Labeling wdg) ọ nwere nnukwu ihe achọrọ na teknụzụ, ihe siri ike, ngwa ngwa. Ọ na-anabata echiche ọgụgụ isi, ụdịdị, nke mepụtara nke ọma. Suit maka iche iche nke akwụkwọ, labeelu, kaadị, mbukota igbe, karịsịa maka ngwaahịa na static ọkụ eletrik, onwe akara, multi-oyi akwa plastic igbe wdg pụrụ iche mbukota akpa nzuzo, obibi & tracing. Enwere ụfọdụ nhọrọ nhọrọ maka nhọrọ dịka nchọpụta abụọ, dozie onwe ya, ịjụ akpaaka wdg.
Product aha: Standard nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu (UV-ebi akwụkwọ) / High ọsọ ọgụgụ isi nri & ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu (UV-ebi akwụkwọ)
Nlereanya: BY-TF01 / 02-400 (UV) / BY-HTF01 / 02-400 (UV)
Atụmatụ: UV-ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu na-mepụtara dị ka anyị ọkọlọtọ nwere ọgụgụ isi-ebi akwụkwọ n'elu ikpo okwu na UV ebi akwụkwọ mma na technology chọrọ. Ọ bụ ọkwa dị elu, ọgụgụ isi bara uru. Ọ nabatara ụdị ọrụ na ahụmịhe nke ụlọ ọrụ dị iche iche, na-anabata echiche ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi, na ụdịdị. Suit maka iche iche nke akwụkwọ, labeelu, kaadị, mbukota igbe, karịsịa maka ngwaahịa na static ọkụ eletrik, onwe akara, multi-oyi akwa plastic igbe wdg pụrụ iche mbukota akpa nzuzo, obibi & tracing. Enwere ụfọdụ nhọrọ nhọrọ maka nhọrọ dịka nchọpụta abụọ, dozie onwe ya, ịjụ akpaaka wdg.
Aha aha: Standard rewinder na TTO ngwa nbipute Standard rewinder maka UV ngwa nbipute / Akwa-ọsọ rewinder maka UV ngwa nbipute
Nlereanya: BY-SR500-TTO / BY-SR500-UV / BY-HR450-UV
Njirimara: e mepụtara ya maka ụdị akara na nkwakọ ngwaahịa ihe achọrọ. Dị ka omenala labeelu-ebi akwụkwọ technology chọrọ na nzuzo na kpọọ atụmatụ, anyị gbalịrị iru ”otu igwe na ọtụtụ ngwa, ọ bụ uwe n'ihi na fim rewinding na labeelu si rewinding nakwa”. "Otu igwe nwere ọtụtụ ọrụ, ọ dabara maka ngwa obibi TTO na UV obibi akwụkwọ yana". "Otu igwe na ọtụtụ modular, modular na nhazi, ndị ọrụ nwere ike ịme nhọrọ modulu dịka mmepụta ha chọrọ". Ọ bụ ihe kasị mma nhọrọ maka labeelu na mpịakọta na ihe nkiri na mpịakọta si nzuzo.
Ọ na - anabata HMI 7inch mara mma, PLC, micro PC maka njikwa. Ndị mmadụ nwere ike ime ntọala ntọala na HMI dịka ụdị ihe nkiri na ederede akwụkwọ na usoro ihe dị iche. Ka ọ dị ugbu a, HMI ga-enyocha ọnọdụ ọrụ na ezigbo oge ma nyekwa mkpu. Lehapụ & collection na linear usoro n'okpuru rollingchịkwa usoro, agbanwe inwego ọsọ, Anti-atọpụ mgbe nkwụsị. Akara ma ọ bụ akara swatch na-arụ ọrụ. Ọ ghọtara na njikwa ọgụgụ isi. ma ọ bụrụ na ndị ọrụ chọrọ ịkpọlite ​​ndị ebi akwụkwọ ziri ezi, e nwere otu nhọrọ ọrụ aha ya bụ Auto mezie usoro.
Product aha: ọkọlọtọ nwere ọgụgụ isi feeder
Intruduction: Igwe nri nwere ọgụgụ isi, bụ ihe ọhụrụ anyị ji azụ nri, nke pere mpe na ọkụ. Mepụta ngwaahịa dị ukwuu, ntinye ngwa ngwa, nnyefe ziri ezi na ọdụ ụgbọ mmiri na-emeghe, nke bụ iji dochie ndị ọrụ.
Nyefe na ngwugwu ngwugwu, kaadị na-eri nri na ịkparịta ụka n'onntanet na usoro mmepụta dị iji ghọta nnyefe ihe. Nhazi ahụ bụ usoro nchọpụta abụọ, nchọpụta ihe, ọrụ mkpuchi mkpu. Usoro nchịkwa ya bụ HMI & PLC, nhazi ntọala dị mfe ma dịkwa mfe.
Njirimara: mkpu mpempe akwụkwọ abụọ & nkwụsị, na-agụta, na-arụ ọrụ dịka usoro na oge esetịpụrụ, Enweghị mkpu mkpu & ịkwụsị, njide onwe onye ma ọ bụ njikwa site na mpụga iji kpalite ngwaahịa nri. Ọ bụ maka ụdị kaadị, akara, akwụkwọ, apịaji mpempe akwụkwọ, ngwa akwukwo na ụdị mpempe akwụkwọ.
Standard multi-ojii nwere ọgụgụ isi nri & collating usoro
Akwa-ọsọ multi-ojii nri & collating usoro
New multi-ojii ọgụgụ isi nri & collating usoro
Nlereanya: BY-MFJ3000-06 / BY-MFJ6000-06 / BY-MFJ6000-07
Njirimara: ọ bụ anyị mbụ nnyemaaka akụrụngwa maka mbukota igwe, nke dochie mmadụ ọrụ na iche iche nke e biri ebi ngwaahịa sorting na usoro, dị ka otu labeelu, agba peeji nke, akwụkwọ ntuziaka, akwụkwọ, kaadị na CD wdg ya mmepe dabeere na modular, ịkparịta ụka n'ingntanet imewe echiche, ịchụso ọsọ ọsọ ọsọ, ziri ezi na nnyefe.
Product aha: ọkọlọtọ ihu nkpuchi nri & ígwè obibi akwụkwọ （KN95）
Nlereanya: BY-TF04-300 (KN95)
Njirimara: ọ bụ site na teknụzụ otu na feeder. Nhazi ahụ bụ ọmarịcha, usoro kọmpat, kwụsie ike dị elu, ọkachasị maka nrụpụta ihe nkpuchi ihu. Ọ bụ maka disposable ihu nkpuchi na N95 / KN95 ihu nkpuchi si nri & obibi. Ma enwere ike ijikọ ya na igwe akụrụngwa dị nụ. Ọrụ nwere ike họrọ na-aga n'ihu nri ma ọ bụ un-aga n'ihu nri dị ka mmepụta chọrọ. (Rịba ama pls: enwere ụfọdụ ihe dị iche maka nri nkpuchi ihu & mbipụta).
Product aha: Standard ihu nkpuchi feeder
Nlereanya: BY-TF04-300 (ihe nkpuchi ihu ihu)
Njirimara: ọ bụ site na teknụzụ otu na feeder. Nhazi ahụ bụ ọmarịcha, usoro kọmpat, kwụsie ike dị elu, ọkachasị maka nrụpụta ihe nkpuchi ihu. Ọ bụ maka disposable ihu nkpuchi nri. Ma enwere ike ijikọ ya na igwe akụrụngwa dị nụ. Ọrụ nwere ike họrọ na-aga n'ihu nri ma ọ bụ un-aga n'ihu nri dị ka mmepụta chọrọ. (Rịba ama pls: enwere ụfọdụ ihe dị iche maka nri nkpuchi ihu & mbipụta).
Product aha: High Speed ​​ihu nkpuchi nri & ígwè obibi akwụkwọ (KN95)
Njirimara: ọ bụ site na teknụzụ otu na feeder. Nhazi ahụ bụ ọmarịcha, usoro kọmpat, kwụsie ike dị elu, ọkachasị maka nrụpụta ihe nkpuchi ihu. ọ bụ maka N95 & KN95's nri & obibi.